ပါစင်နယ်ဧရိယာ စကားဝှက်မေ့နေသည် – FBS
FBS Personal Area (ဝဘ်)ဆိုတာဘာလဲ?
FBS ပါစင်နယ်ဧရိယာ (ဝဘ်) တွင် အကောင့်သစ်ဖွင့်ချင်ပါသည်
FBS ပါစင်နယ်ဧရိယာ (ဝဘ်) တွင် ဒီမိုအကောင့်စမ်းချင်ပါသည်
အကောင့် leverage ကိုဘယ်လိုပြောင်းရမလဲ?
သင်၏ ပါစင်နယ်ဧရိယာစကားဝှက် ပြန်လည်ရယူရန်၊ ကျေးဇူးပြု၍ လင့်ခ်ကို လိုက်နာပါ။
စကားဝှက်အား အခြားတစ်ခုနှင့် ပြန်လည်ရယူနိုင်သည်:
စကားဝှက်အား အီးမေးလ်မှတဆင့်ပြောင်းရန်၊ ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ပါစင်နယ်ဧရိယာတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော အီးမေးလ်လိပ်စာထည့်ပြီး "အတည်ပြုပါ" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ:
ထို့နောက် စကားဝှက်ပြန်လည်ရယူမည့် လင့်ခ်ရပါလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ထိုလင့်ခ်ကိုနှိပ်ပါ။ ပါစင်နယ်ဧရိယာ စကားဝှက်အသစ်ပြန်ဝင်ရမည့် နေရာသို့ရောက်သွားပြီးနောက် အတည်ပြုပေးပါ:
စကားဝှက်အား ဖုန်းမှတဆင့်ပြောင်းရန်၊ ပါစင်နယ်ဧရိယာတွင် အတည်ပြုထားသော ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပေးပြီး၊ "အတည်ပြုပါ" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ထို့နောက်၊ ဖော်ပြထားသော ဖုန်းနံပါတ်ထံ ကုဒ်လက်ခံရရှိပါလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးပြု၍ “စကားဝှက် ပြန်လည်ရယူပါ” ကွက်လပ်တွင် ရရှိသောကုဒ်ထည့်ပြီး၊ “အတည်ပြုပါ” ကိုနှိပ်ပါ။ ပါစင်နယ်ဧရိယာ စကားဝှက်အသစ်ပြန်ဝင်ရမည့် နေရာသို့ရောက်သွားပြီးနောက် အတည်ပြုပေးပါ။
သင်၏ ပါစင်နယ်ဧရိယာစကားဝှက် ပြောင်းပြီးပါပြီ! ခုခါ ပါစင်နယ်ဧရိယာတွင် အကောင့်ဝင်နိုင်ပါပြီ။